रोनाल्डोलाई उछिन्दै यी खेलाडीले हात पार्न सक्छन् गोल्डेन बुट - Unity Khabar
रोनाल्डोलाई उछिन्दै यी खेलाडीले हात पार्न सक्छन् गोल्डेन बुट
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : १५ असार २०७८, मंगलवार १३:१९
काठमाडौं: बेल्जियमसँग १–० ले पराजित भएर पोर्चुगल युरोकपबाट बाहिरिइसकेको छ । तर, पोर्चुगलका स्टार क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो जारी युरोमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सुचीमा पहिलो नम्बरमा छन् । उनले ५ गोल गरेका छन् ।
चेक गणतन्त्रका प्याट्रिक सिक रोनाल्डोपछि यो सुचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । उनले चार गोल गरेका छन् । चेक गणतन्त्रले क्वाटरफाइनलमा डेनमार्कको सामना गर्दा सिकले रोनाल्डोलाई उछिन्दै सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने र टोलीलाई खेल जिताउने लक्ष्य राख्नेछन् ।
फ्रान्सका करिम बेन्जामाले पनि स्विचरल्यान्डविरुद्ध दुई गोल गर्दै आफ्नो गोलसंख्या चार पु¥याएका थिए । तर, पेनाल्टी सुटआउटमा फ्रान्स ५–४ ले पराजित भएसँगै उनी सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने संभावना सकियो ।
स्विडेनका इमिल फोर्सवर्ग, स्विचरल्यान्डका हेरिस सेफेरोभिक र बेल्जियमका रोमेलु लुकाकु पनि सर्वाधिक गोलकर्ताको दौडमा छन् । यी तीनैजनाले तीन–तीन गोल गरेका छन् र टोलीलाई क्वाटरफाइनलमा पु¥याउन सहयोग गरेका छन् ।
पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डोस्की र नेदरल्यान्डस्का जर्जिनियो विज्नाल्डुमले पनि ३–३ गोल गरेका छन् । तर, पोल्यान्ड र नेदरल्यान्डस्को चुनौती प्रतियोगितामा सकिइसकेको छ । त्यसकारण, यी खेलाडी पनि गोल्डेन बुटको दौडमा छैनन् ।
स्पेनका पाब्लो साराबिया र फरान टोरेस, इटलीका सिरो इम्मोबिल, माटियो पेसिना र म्यानुअल लोकाटोली, स्विचरल्यान्डका जर्दन साकिरी, स्विडेनका रोमन यारेमचुक, युक्रेनका आन्द्रे यार्मोलेन्कोले पनि २–२ गोल गरेका छन् ।
प्रतियोगितामा स्पेन, इटली र स्विचरल्यान्ड क्वाटरफाइनल पुगिसकेका छन् । आज युक्रेन र स्विडेनको खेल बाँकी छ । त्यसैले, यी खेलाडीलाई पनि गोल्डेन बुटको दाबेदारका रुपमा लिइएको छ ।
रोनाल्डोका नाममा यी किर्तिमान पनि
रोनाल्डो युरोकपको इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । २००४ यता प्रतियोगिताका पाँच संस्करण खेल्दै उनले कुल १४ गोल गरेका छन् । यो किर्तिमान भने यसपटक कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने किर्तिमान पनि देई अली र रोनाल्डोको नाममा संयुक्त छ । अलीले ईरानका लागि १ सय ९ गोल गरेका थिए । रोनाल्डोले समूह चरणमा फ्रान्सविरुद्ध पोर्चुगलका लागि गोल गर्दै यो किर्तिमान बराबरी गरे । रातो पाटीबाट साभार
अलमुताइरीलाई एन्फाको आग्रह : राजीनामा फिर्ता लिनुस्
अलमुताइरीको राजीनामापछि एन्फाविरुद्ध खनिए फुटबलप्रेमी
यस कारण १३ औं साफ नेपालमा हुन सक्छ
एक्कासी किन गरे अलमुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा? यस्तो छ कारण
निर्मला हत्याले प्रहरी बर्दीमा लागेको दाग अझै मेटिएन
१० श्रावण २०७८, आईतवार १७:५४
१० श्रावण २०७८, आईतवार १५:२६
१० श्रावण २०७८, आईतवार १५:१२
१० श्रावण २०७८, आईतवार १४:५७
नारदमुनिकाे त्यो अभिव्यक्ति जसले संसदीय समितिमा भयो हंगामा
१० श्रावण २०७८, आईतवार १४:३८
गृहप्रदेशमा सत्ता नेतृत्व गर्ने दाउमा देउवा
९ श्रावण २०७८, शनिबार १२:०६
माधव नेपाललाई महेश बस्नेतले भने मुखले सम्झाउँदा नमाने हात…
१० श्रावण २०७८, आईतवार १२:०४
‘भूत’ को डरले बार्दलीमै बित्छ रात!
९ श्रावण २०७८, शनिबार १६:५४
ओलीलाई महाराजाधिराज भनेकोमा माधवलाई प्रचण्डले दिए धन्यवाद
९ श्रावण २०७८, शनिबार १२:३४